कथा : तिमी कसैकी प्रेमिका हौ कि समलिङ्गी ? - Vishwa News
26-Feb-2020 | १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार
पर आकासमा एउटा तारा झरेपछि उस्लाई रातको सन्नाटाले आँखा झिम्काएको महसुस भयो । कौसीमा बसेर, व्हिस्कीमा खसेको बरफको टुक्रा जस्तै ऊ आफैभित्र पग्लिरहेको थियो । परिवारका सवै सदस्यहरु आ–आफ्नो कोठामा गइसकेका थिए । उसको मनमा हठात आज श्रीमतीसँगको पहिलो रातको चेतना आयो ।
सुहागरात शब्दै मीठो छ । आज तीस बसन्तपछि पहिलोपटक उनको रात सुहागसित जोडिएर आएको छ । मनभरि मीठा मीठा कल्पनाहरु । चलचित्रमा मात्र हेर्दै आएको सुहागरातको आज साँच्चिकै अनुभुत गर्न पाइने । मनभरि व्यग्रताले यस्तै यस्तै सोचाइ बुन्न थाल्योे, भित्र कोठामा श्रीमती घुम्टो ओढेर लजाउँदै होली, त्यस्को पनि मनको धडकन यस्तै तेज होला । कहिले पतिदेव आउला र सुस्त मुलायम हातले आफ्नो घुम्टो उठाउला भन्ने कल्पनाको सञ्चार उस्को मनमा पनि होला । आखिर नारी न हुन् । उसको मनले हठात एउटा गीत गायो, कभि कभि मेरे दिलमे ख्याल आता हे । गीतले फडको मार्यो, सुहागरात हे घुँघट उठारहा हुँ मे । मन सारै बेचैन भयो । सयौं चलचित्रको सयौं सुहागरातको दृष्य उसको मस्तिस्कमा खेल्न आयो । एक गिलास दुध, घुम्टो, हल्का हल्का लज्जा, अँगालो । कल्पनामा एउटी नवदुलहीले देखाउने धेरै कुराहरु आयो ।
विस्तारै भित्र कोठामा प्रवेश गर्यो । श्रीमती कोठामा भित्तातिर मुख फर्काएर सुतिरहेकी थिइन् । चलचित्रमा देखाएजस्तो पत्नी जागेरै उस्को व्यग्र प्रतिक्षामा थिएनन् । उस्लाई झनन रिस उठयो । के तालकी केटी होली ? भित्रभित्रै गाली गर्यो । ऊ गएर त्यसको नजिक गएर बस्यो । कोल्टो फेरेकी श्रीमतीको मुख आफूतिर फर्काउन मन लाग्यो । तानेर आफैतिर फर्कायो । अर्धचेत अवस्थामा रहेकी श्रीमतीको दुवै गालामा बिस्तारै ओठ र जिब्रो दौडाए । गालाबाट एक किसिमको नुनिलो स्वाद आयो । यो के हो ? चुम्वन पनि यतिको नुनिलो हुन्छ र ? मीठो हुनुपर्ने होइन र ? आफ्नो ओठ निकालेर श्रीमतीलाई हेरे, आँखाबाट गालाको बाटो हुँदै आँसुका दोधारा अविरल बगिरहेको थियो । मानौँ, गालामा छोएको हल्का स्पर्श पनि उनलाई सह्य थिएन ।
यो मेरी श्रीमती कि कसैकी प्रियसी ? किन उसलाई पतिको मायालु स्पर्शमा पनि सुख छैन ? म जति आनन्दित छु किन यो त्यति आनन्दित हुन सकेकी छैन ? ऊ किन उतेजित छैन । बरु मलाई जीवनको पहिलो चुम्वनमा पनि नुनिलो आँसु पिलाइरहेकी छे । यो पक्कै धोकेवाज हो । कुमारी होइन, नागिन हो । यस्को कुमारित्व धर्रर च्यातिसकेको छ, पुरानो लुगा जस्तै, होइन भने स्वर्गीय आनन्दमा पनि उस्को यो वेवास्ता किन ? उस्को मनमा नानाभाँतिका कुरा खेल्न थाले ।
उस्ले सम्झ्यो फिल्मका धेरै धेरै दृष्यहरु । चलचित्रमा श्रीमानको स्पर्शमा उतेजित हुने श्रीमतीका कामुकताहरुलाई । पुरुषको प्रत्येक छुवाइ र चुम्वनमा, छिटो छिटो सास फेरेर, आँखालाई विचित्र चित्र बनाएर पानी विनाको माछीजस्तै तडपिने एक एक क्रियाकलापहरु सम्झेँ । तर, यहाँ हरेक चुम्वनमा नुनको स्वाद सिवाय केही छैन । सुहागरात भनेर यस्तो महत्व दिएको छ, यति झुर, कोरा र बेरस होला भनेर उस्ले कल्पना पनि गरेको थिएन । दसौं हजार रातको ब्यतीतपछि पाएको यो एक विशेष रात अरु रातकै मूल्यमा साटिएर पातबाट तप्केको शीतजस्तो निरर्थक जाला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन ।
धेरै साथीहरुले आआफ्नो सुहागरातको बारेमा गरेको रंगिन ब्याख्या पनि उस्ले सम्झ्यो । आफूलाई मात्र अभागी देख्यो उस्ले । प्रेमविवाह नै गर्नुपर्ने रहेछ, यो कसैकी प्रेमिका पक्कै पनि हो । होइन भने यस्ले यति वेवास्ता कुनै पनि हालतमा गर्ने छैनन् । उस्लाई साह्रै रिस उठयो । श्रीमतीको जुन दिशाबाट खोसेर मुख यता फर्काएको थियो, फेरि उतै फर्काएर पडाडिबाट धकेलि दियो । उस्को बलले धकेलेकोले श्रीमती बेगिएर भितातिर ठोक्कियो । अघिको शान्त नदी ठूलै भेलको आकार लिएर सुसाएको अनुभव गर्यो । आवाज आयो भित्ताबाट–हिक्क, हिक्क । त्यो हिक्क, हिक्क यौनआवेगको थिएन, बल्कि यौन तिरस्कारको थियो ।
उस्को मनमा त्यो बेला यौनसिवाय अरु कुनै भावनात्मक तरंग थिएन । विवाह गरे पछि पहिलो रातभरि सेक्स हुनुपर्छ भने पुरुषात्मक अहम् सिवाय केही थिएन उस्को मनमा । यो रात नै सुहागरात हो र चलचित्रमा देखाएजस्तो दुइटा नाँगो शरीर टाँसिएर एउटै हुनुपर्छ र त्यसमा पनि नारीको शरिर पुरुषको शरिरले ढाकिनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ऊभित्र हावी भइरहेको थियो । यसैले त सोचेजस्तो नभए पछि जिउँदो लास मानेर, श्रीमतीको शरीरलाई जोडले धकेलेर पारी पुर्यायो । त्यो व्यवहारले उनको शरीर वाहेक भावनामा कति ठेस पुग्यो, यौनपिपासु भएको बेला उस्ले कल्पना पनि गर्न सकेन । के, के सोच्दै त्यो रात, त्यो त्यहीँ भुसुक्क निदायो । श्रीमती त्यो रातमा सुत्यो, सुतेन उस्ले चासो पनि राखेन । भोली विहान उठ्दा श्रीमती कोठामा थिएन ।
वाहिर जाँदा साथीहरुले उस्लाई रातभरि निदाइनस् कि क्या हो, आँखा त रातो रातो छ भनेर जिस्काए । उस्ले केही पनि बोलेन् । आफ्नो दु:ख पनि फुकाएन । म सावित रातझैँ समयमै सुतेको छु भनेर साथीहरुलाई जवाफ पनि फर्काएन । घर आयो । सुहागरात जस्तै अरु एक दुई हप्ता पनि त्यसरी नै रातमा यौन हारेरै बित्यो ।
एकदिन श्रीमतीले बिहान चिया लिएर आउँदा कोठामा उस्ले आदेश दियो; ‘सोफामा बस्’। ‘तेरो आमाबुबालाई दाइजो लिएर आउनु पर्दैन भन । भो पर्दैन अव केही पनि तेरो सामान ओसार्न ।’
नवदुलहीले विचित्र भावले सोधी, ‘किन ?’
‘मैले तिमीलाई डिभोर्स दिने निर्णय गरेको छु । मेरो वकिलसित सल्लाह गरेरै मैले यो कागजपत्र पनि बनाएको छु । यस्मा तिम्रो मात्र सिगनेचर बाँकी, मैले गरिसकेँ ।’ यति भन्दै उस्ले त्यो कागज र पेन टेबुलमा राख्यो ।
‘मैले त्यस्तो के गरेकी छु र हजुरले यस्तो निर्णय लिनुभयो ?’
‘कि तिमी कसैकी प्रेमिका हो, कि समलिङ्गी हो ।’ उस्ले आँखा ठूल्ठूला पारेर बोल्यो ।
‘कुन प्रमाण लिएर बोल्दै हुनुहुन्छ हजुरले ?’ उनले पनि रिसाएरै सोधिन् ।
‘कस्तो हुर्नेपर्ने त सुहागरात…?’
ऊ जुरुक उठयो र लेपटप अन गरेर एउटा अश्लील भिडियोको सुहागरातको एक क्लिप देखाएर भन्यो, ‘यस्तो हुनुपर्ने हो सुहागरात ।’
त्यो देख्नेवितिकै त्यस नारीको आँखाबाट आँसु अविरल बग्न थाल्यो । फेरि कहीँबाट एकमुठी शक्ति निकालेर, अविरल बगेको आँसुलाई हत्केलाले पुछदै बोलिन्,
‘तपाईको निम्ति सुहागरात भनेको किस हो, सेक्स हो । रातभरि सेक्स नै सेक्स नै सम्झेर बस्यौ होला, आखिर पुरुष न हो । म त त्यो रातभरि दुई महिनाको बाँकी जिन्दगी बोकेर छोरीलाई सकी नसकी कन्यादान दिने बाबुलाई सम्झिरहेँ । दुई महिना पछि बिधवा भएर लाचार हुने दमकी रोगी आमालाई सम्झिरहेँ । अपाङ्ग भाइलाई सम्झिरहेँ । मेरो यस्तै, यस्तै भावनाले मन–मुटु फाटयो होला, त्यो बेला, त्यो फटाइलाई तपाईले पूर्वप्रेमीले फाटेको कुमारित्व देख्नुभयो । तपाईको लागि भनेर सवै चिज त्यागेर आएकी नारीबाट कुनै न कुनै रातमा अवश्य सुहागरात पाउनु हुन्थ्यो । पहिलो रातमा नारीको भावनालाई सुम्सुम्याउनुहोस् अनि महान पुरुष हुन्छ । नारीले त्यागेको संसारलाई एउटा कोठामा बसेर जित्ने तपाई जस्ता पुरुषलाई नारीको पीडा के महसुस हुन्छ ? विवाहकै पहिलो रातमा सेक्स खोज्नुभयो । भावनात्मक समागमको आनन्द के महसुस गर्नुहुन्छ ? अव कहिले पाउनु हुन्न सेक्स तपाईले मसित । मैले पनि डिभोर्स दिने निर्णय गरेँ ।’ यति बोलेर उस्ले टेबुलमा राखेको कागज र पेन सँगै उठाइन् । सिगनेचर गर्नुअघि श्रीमानतिर हेर्दै मुसुक्क हाँसिन र उनको हातको कलम त्यो कागजमा चिप्लियो, सुरुरु । सिगनेचर गर्नुअघि उनको मस्तिस्कमा श्रीमानले बोलेको डाइलग आइरहयो मात्र, ‘कि तिमी कसैकी प्रेमिका हो, कि समलिङ्गी हो ।’ यही सोचाइको बीच बीचमा आफ्नो रोगी बाबुलाई पनि सम्झिरहिन्, सम्झिरहिन् र मुखबाट एउटा बोली फुट निस्कयो, पैँतालीस दिन बाँकी । यौनपिपासु श्रीमानले उस्को अर्धचेतमा निस्केको बोली भन्दा उस्ले सिगनेचर गरेर हातमा समातेको कागजमा ध्यान दिइरहेको थियो ।
के सिन्धुपाल्चोकमा आइपुगेको हो कोरोना ?
एकातिर बर्निको पल्लाभारी, अर्कोतिर ट्रम्पको ‘लोकप्रियता’ बढ्दै, कस्तो होला नोभेम्बरको भिडन्त ?
जनगणना सचेतनाका लागि न्यू ह्यामसरमा छलफल, सबैलाई आफ्नो पहिचान खुलाउन आह्वान
रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनाको प्रतिवेदन,मुख्य दोषी को ?
निर्यात बढ्दा सुधारियो व्यापार घाटा
नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय